Iko hakuna zvimiro zvepamutemo asi zvinofungidzirwa kuti Apple yakatengesa 1 Apple Tarisa iyi yapfuura Q3.200.000 | Ndinobva mac
Mune ino kesi, hapana zvakawanda zvatinogona kutaura zviri pamutemo uye ndezvekuti Apple haina kupatsanura kutengesa kunoitwa neApple Watch mumhedzisiro yayo yezvemari, uye iyi inyaya inounza vashandisi vazhinji, vaongorori uye mamwe midhiya akasarudzika kubva pfungwa dzavo dzinojekesa kana wachi yeCupertino ichinyatso kubatsira muchiso. Tim Cook pachake akadzokorora pachena achitsanangura kuti vanogutsikana nenhamba dzekutengesa kwechigadzirwa, asi Neil Cybart inoenda kumberi uye inoisa iyo Apple Watch pamusoro peRolex pachayo maererano nemari yemafemu.
Iyo Apple Watch inoenderera ichiita mutsauko pakati pekupfeka pamusika uye humbowo hweizvi ndechekuti Cook akataura kuti parizvino vasvika Fortune 500 uye Izvi zvinoreva kuti anodarika mamirioni mashanu emadhora anobhadharwa pagore. Chero zvazvingaitika, kuratidzwa kweichi ndechekuti nepo vamwe vezvenhau vachiedza kutiita kuti tione kuti kutengesa hakuna kunaka muchikamu ichi, Apple inoramba ichiwana mari yakawanda newachi yayo.
Makore maviri mushure mekuburitswa kwayo, iyo Apple ingadai yakawana kutengesa kwe3.200.000 mauniti ekupedzisira Q1, chimwe chinhu pazasi peQ4 icho chinotaura nezve angangoita mamirioni 5,5 mauniti asi ichichengetedza mhando kunyangwe zvese.
Zvinotarisirwa zvakare kuti gore rino nekuuya kweiyo itsva wachi wachi Apple inoenderera mberi kukunda nhamba dzevatengesi. Iko kubudirira uko nhasi uye ne "nguva pfupi" iyo Apple Watch yanga iri pamusika, iyi ndiyo yakatengesa kwazvo wachi pasi, ichipfuura kunyange mafemu echinyakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iko hakuna huwandu hwepamutemo asi zvinofungidzirwa kuti Apple yakatengesa iyi yapfuura Q1 3.200.000 Apple Watch
Apple inoratidza zvirongwa zvayo zveApple Store muWashington Carnegie Library